Sorrento Coast Yekushanya Inodzika Kumusoro Mushure mekusurukirwa Nenjodzi Kuputsa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Sorrento Coast Yekushanya Inodzika Kumusoro Mushure mekusurukirwa Nenjodzi Kuputsa
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Italy Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Sorrento Coast - Mufananidzo © Mario Masciullo
Iyo Sorrento Coast, imwe yenzvimbo shoma dzevashanyi vekuItaly, kuwedzera kuAmalfi Coast, iyo yaipinza vanyori uye vadetembi veGreat Tour pakati pezana remakore rechi18 nerechigumi nemapfumbamwe, zvichikonzera kuyerera kwevashanyi vepasirese, kusvika kunguva yakaipa yedenda, yakanyorwa kunonoka kupora zhizha rino ra19.
Iyo Sorrento Coast ine yenguva pfupi yadarika yakwezva zvikuru vashanyi veItaly uye vashoma vatorwa.
Aya mamiriro akadzoreredzwa zvachose kubva 1919 uye kudzoka kwekutya kuchimirira kudzoka kune zvakapfuura.
Kushaiwa kwekufamba kwenguva nekuda kwedenda hakuna kuchinja hunhu netsika muSorrento nenzvimbo yayo yakanaka kwazvo.
Kunyanya, izvo zvemuno zvekudya zvekudya zvinorongedzwa nemaresitorendi uye trattorias muSorrento nemataundi akavakidzana, kuwedzera kumaresitorendi anotungamirwa nevane mbiri vabiki vakaita saIl Buco naDonna Sofia, wekupedzisira anodiwa weItaly cinema icon Sofia Loren, anoramba achinaka senge nokusingaperi.
Neraki, zvese zvinoramba zvisina kushandurwa kuti ubatsirwe nevashanyi vanogara vachifara kuwana mamaneja anodya avo vave shamwari nekufamba kwenguva uye vowana zvekare mamamusic echinyakare. Iyi fomu yekuremekedza zvakare yekubatsira kwezvizvarwa zvitsva, huvepo hwavo hwakaonekwa pakupera kwaJuly.
Kuona kweHotera Mediterraneo nenzvimbo yayo yekushambira yega - Mufananidzo © Mario Masciullo
Iwo Mutsika wehotera muSorrento
Guta reSorrento inonyora mahotera ane nyeredzi zana nemakumi maviri / makumi matatu, kazhinji emhuri anomhanyisa - tsika yakapihwa kweanopfuura makore zana. Munguva ino yenguva, huwandu hwakanaka hwezvivakwa hwave dzimba dzekugara dzakatendeseka nekuda kwehunyanzvi ruzivo uye mupiro wezvehupfumi unotora kubva mukushanya nekupfuura.
MD uye Pietro Monti, Hotel Mediterraneo, Sorrento - Mufananidzo © Mario Masciullo
Inonakidza Nyaya Yenyaya
Nyaya inokatyamadza yakadzamiswa naSergio Maresca, Managing Director (MD) weHotel Mediterraneo, vane tsika refu yekugamuchira vaeni uye shanduko yerudzi inotenderera pamusoro pemakore zana, uye inorondedzerwa seyakafanana "nhoroondo yenyaya."
Pakutanga, hotera iyi yaive yekugara yega yakavakwa muna 1912 uye yakashandurwa ikava hotera naAntonietta Lauro, "ambuya Etta," hanzvadzi yemuridzi wengarava Achille Lauro, mbuya-mbuya naambuya veavo parizvino vanotarisira hotera iyi.
“Zvizvarwa zvakabudirira uye shamwari itsva dzemhuri dzakapinda mubhizinesi, asi mweya wekugamuchira vaeni wakaramba wakadaro. Kwatiri, ino inogara iri imba hombe inogara mhuri inoshamisa kune vatinoshanda navo uye vatengi vedu vekare uye vatsva neshamwari, "yakadaro hotera MD.
Vandudzwa Kutarisana neRamangwana
Mupiro wekupa wakabva kumutemo weInvitalia pamusoro pekugadziriswazve kwemahotera mahombe gumi nemaviri muSorrento. Chinangwa chebasa racho ndechekusimudzira mhando yemahotera nekupa vanonyorera mari isingabhadharwe uye zvikwereti zvinopihwa.
Iyo Sorrento peninsula, pakati pezvimwe zvinhu, yakakosha maererano nekupinda inenge 15% yekuyerera kweCampania uye 30% yedunhu reNaples, uye inokwana kuita 0.75% yesangano renyika rese rekushanya kwehotera.
Panyaya iyi, kuda kuziva kwakakonzera kuferefetwa kwenyaya iyi nekubvunzurudza Pietro Monti, Marketing Director weiyo yega-yega-zana zvivakwa munzvimbo yeSorrento, iyo MD yakataura nezvayo, ndiye anowana chirongwa chekugadzirisa.
Chikwereti, sekureva kwaPiero Monti, chakaiswa mari kuvandudza hotera ine chifananidzo chakamira munzvimbo dzese dzekugara nemidziyo inoratidza maratidziro egungwa mune yakakosha-yanhasi kiyi. Chimiro chakashandiswa chaive chemafashoni uye chakanyanya-chinoshanda dhizaini yekugadzira yakagadzirwa nezvinhu zvakajairika zvemahombekombe - Vesuvian lava, parquet flooring inoyeuchidza matanda akavakirwa pamusoro pegungwa, marambi -style marambi, uye zvishongedzo uye makabati mhangura - chinhu chine kugadziriswa kwacho kune midzi yawo mutsika yeNeapolitan.
Cellar yekudyira nzvimbo yeDonna Sofia yekudyira yakachengeterwa vashanyi vakakosha - Mufananidzo © Mario Masciullo
Yakawedzerwa kune ichi chikamu chegastronomic uye shanduko yeti terrace yayo yakaisvonaka SkyBar ine panoramic maonero pamusoro peGungwa reNaples kuenda kuVesuvius volcano. Ngarava ine simba yemota inowanikwa yevaenzi yenzendo dzekuenda kuchitsuwa chiri pedyo cheCapri kana kumwe kunhu. Kugadziridza uye nemasevhisi nyowani anosanganisira yakavanzika mahombekombe yakawana iyo hotera imwe nyeredzi, ichiita nhasi hotera ye5-nyeredzi.